Dongguan Fuya Hardware & Plastic Products Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2008. Orinasa mampiditra R&D, endrika, famokarana ary varotra izy io. Ny sehatry ny orinasa lehibe; plastika, vokatra ao an-trano, mpanantona akanjo, farango varavarana, faritry ny kapoaka hosoka, rakitsary, fefy herinaratra, fefy fampirantiana, sofina fanamafisam-peo, felam-baravarankely, sns. milentika, milina cnc an'ny faritra sns.
Ny Fuya Hardware dia manana andiany efa ho 100 an'ny Japan Tsugami sy ny milina (CNC) milina avo lenta sy milina fikosoham-bary, lathes mandeha ho azy ary ny fitaovana fanampiana fanampiny. Mba hahatratrarana ny avo lenta amin'ny fikirakirana CNC, ny orinasa dia manana fitaovana fanandramana mandroso toy ny fitaovana fandrefesana contour, telo-dimensional, roa-dimensional, tester hozatra, tester automatique infrared, boribory, fahasarotana sns.
Na dia manohy manatsara ny fahaizany injeniera sy serivisy teknika aza, ny Fuya Hardware dia miantehitra amin'ny famokarana manan-karena sy ny traikefa fitantanana hanatanterahana am-pahavitrihana ny fanovana avy amin'ny famokarana ozinina sy ny fampandrosoana ny haitao mankany amin'ny sehatry ny e-varotra, manaraka akaiky ny fihodinan'ny toekarena fahalalana sy ny toekarena tambajotra , ary ezaho ny manangana orinasan-tseraseran'ny teknolojia. Atsangano tsikelikely ny faritany iraisampirenena mifototra amin'ny tanibe Shina ary miparitaka amin'ny faritra rehetra manerantany. Miezaha ho mpamily lehibe indrindra amin'ny fanovana indostrialy sy fanavaozana ao amin'ny Delta Renirano. Mamorona antony maharitra mandrakizay ny "maharitra, fitoniana, fampandrosoana, teknolojia ary iraisam-pirenena"!
Miaraka amin'ny "kalitao faran'izay tsara manome marika miavaka" ho tanjon'ny orinasa, ampiharo fatratra ny fenitra momba ny rafitra fanamarinana kalitao ISO9001, 9002. Ampahafantaro ny fitaovana famokarana mandroso avy any Alemana sy Italia. Ny vokatr'ilay orinasa dia manana kalitao avo lenta, tsara laza ary serivisy misaina ary nahazo dera iraisan'ny mpanjifa tao an-trano sy tany ivelany ~